Tag Archive for "एसईई परीक्षा" - एसईई परीक्षाफल : सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा कमजोर !
एसईई परीक्षाफल : सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा कमजोर !
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईईको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कक्षा १० का परीक्षा बोर्डले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको हो । विसं २०७५ चैत १० देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन गरिएको एसईई परीक्षामा देशभरबाट कूल ४ लाख ५० हजार २७५ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । नतिजा अनुसार एप्लस ल्याएर ९५९६ जना छात्र उत्तीर... थप पढ्नुहोस्
एसईई प्रश्नपत्र आउट प्रकरण : पक्राउ परेका ६ जना सार्वजनिक !
काठमाडौं । प्रदेश २ मा १४ र १५ चैतको एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरणमा संलग्न ६ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सप्तरीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले दुई प्रहरी अधिकारीसहित ६ जनालाई सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्ने प्रहरी अधिकारीमा सप्तरीको राजविराज–१० का ब्रम्हदेव सुनरैत र कञ्चनरुप–६ का दिपेन्द्रकुमार मण्डल छन् । उनीहरु इलाका प्रहरी कार्यालय, कल्याणपुरमा कार्य... थप पढ्नुहोस्
स्थगित प्रदेश २ को एसईई परीक्षा चैत २२ देखि हुने
काठमाडौ । प्रदेश २ को रद्द र स्थगित गरिएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा 'एसईई' को परीक्षा चैत २२ देखि २९ गतेसम्म गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छ । बोर्डको सोमबार आज बिहान बसको बैठकले २२ देखि २९ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । हावाहुरीले कुनै परीक्षा केन्द्रमा क्षति पुगेको भए त्यसको व्यवस्थापन मिलाउन बोर्ड बैठकले जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई आग्रह गरेको छ। बोर्डले २२ गते विज... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रदेश २ मा स्थगित एसईई परीक्षाको पाँच विषयको प्रश्नपत्र बनाउने प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ । आज आइतबार बस्ने एसईई बोर्डको बैठकले प्रश्नपत्र छपाइको निर्णय गर्नेछ । एसईई कार्यालयले आउट भएका विज्ञान र सामाजिक शिक्षासहित पाँच विषयको प्रश्नपत्र छपाइको तयारी गरेको छ । पनिकाले विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, ऐच्छिक प्रथम, द्वितीय र प्राविधिकतर्फका प्रश्नपत्र छपाइ गर्ने भएको छ । ‘हा... थप पढ्नुहोस्
प्रदेश २ मा लगातार प्रश्नपत्र आउट : परीक्षार्थीहरुद्धारा शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहन
जनकपुरधाम । एसईई परीक्षामा लगातार प्रश्नपत्र आउट हुँदा परीक्षा नै स्थगित गरिएपछि आक्रोशित बनेका प्रदेश २ का परीक्षार्थीहरुले बिभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन् । बिज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र आउट भएपछि यी दुवै विषयको परीक्षा रद्द गरिएको थियो । शनिबार हुने स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षाको समेत प्रश्नपत्र एक दिन अगावै बाहिरिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेश २ को एसईई परीक्षा स्थगित गरेपछि... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएपछि बिहीवार र शुक्रवार प्रदेश २ को परीक्षा स्थगित भएको छ । शुक्रबार बिहान सामाजिक विषयको परीक्षा दिन परीक्षा केन्द्र पुगेका विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिन नपाएपछि विरोध जनाएका छन् । आज शुक्रबारका लागि तोकिएको सामाजिक विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरीए संगै प्रदेश न २ मा तनावग्रस्त नै रह्यो । बिहीबार राती नै प्रश्न पश्त्र बाहिरिएपछि शुक्रबारको परीक्षा... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । केपी ओली सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर नेता कार्यकर्ताहरुलाई धमाधम गिरफ्तार गर्न थालेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आक्रोशित बनेका छन् । महासचिव विप्लवले सोमबार साँझ एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले देशलाई गृहयुद्ध र द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजेको बताएका छन् ।आफ्ना पार्टीका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश वलीसहित थुप्रै नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरि... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत पहिलो पटक आइतवारदेखि माध्यमिक एसईई परीक्षा सुरु भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले दिएको जानकारी अनुसार पहिलो दिन सातवटै प्रदेशमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा भएको हाे । परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीले नेपाल बहस डटकमलाई दिएको जानकारी अनुसार देशभरिबाट चार लाख ७५ हजार तीन जना परीक्षार्थी सहभागी छन् । त्यसमध्ये छात्राको सङ्ख्या छात्रहर... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नायिका करिश्मा मानन्धर आइतबारदेखि शुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 'एसईई'मा सहभागी भएकी छन् । उनले आज पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिँदैछन् । विद्यास्मारक विद्यालय डिल्ली बजार केन्द्रबाट उनले परीक्षा दिन लागेकी हुन् । परीक्षा दिनका लागि उनी बा९च ४२६ नम्बरको आइट्वेनटी गाडीमा परीक्षा केन्द्र पुगेकी थिइन् ।... थप पढ्नुहोस्
२०७५ सालको एसईई परीक्षा तालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 'एसईई' आउँदो चैत १० गतेदेखि गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको बोर्डको बैठकले नियमित, ग्रेडवृद्धि तथा प्राविधिकतर्फको माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा चैत १० गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको हो । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने बोर्डले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिएको छ । परीक्षा तालिका : ... थप पढ्नुहोस्